China ASTM A36 HRC Hot Rolled Steel Strip warshad iyo saarayaasha |Zhanzhi
Ballaca kulul ee duubanbirXariijimo ka yar ama le'eg tahay 600mm, dhumucdiisuna waa 1.2-25mm.Xarigga birta duuban ee kulul ayaa leh xoogaa yar oo tayadeedu liidato (oxidation/dhammayn hooseeya), laakiin caaggiisu waa wanaagsan yahay.
2. Dhumucdiisuna: 1.2-25mm
3.Balladhka: ~ 600mm
4.Coil Miisaanka:1.7 - 10MT ama sida codsigaaga
HEERKA & DARAJADA
Qaybaha qaab dhismeedka
iyo qaybo shaabadeynaya
mishiinada kor u qaadida,
iyo warshadaha fudud.
Xarigga birta duuban ee kulul ee 1.Hot waxaa lagu duubaa heerkul sare oo uu leeyahay ductility wanaagsan.
Xarigga birta duuban ee kulul wuxuu yeelan karaa dhumuc weyn.
Xarigga birta duuban ee kulul waxay leedahay adag tahay.
4. Farqiga u dhexeeya birta duuban ee kulul iyo qabowga:
Xarigga birta ah ee qabow-duuban ayaa leh adayg hooseeya sababtoo ah heer gaar ah oo adkeynaya shaqada, laakiin waxay gaari kartaa saamiga wax-soo-saarka wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa qaybo guga qaloocsan qabow iyo qaybo kale.Isla mar ahaantaana, sababtoo ah barta wax-soo-saarku waxay ku dhowdahay xoogga jilicsanaanta, ma jirto wax saadaal ah oo khatar ah inta lagu jiro isticmaalka, shilalkana way fududahay inay dhacaan marka culeysku ka sarreeyo culeyska la oggol yahay.
1) Saxan qaboojiye waa mid qaboojin ah oo aan lahayn miisaan dusha sare ah iyo tayada wanaagsan.Taarikada birta ah ee kulul ayaa ah kuwo kulul, oo leh miisaan dusha sare ah iyo farqiga dhumucda.
2) Xarigga birta duuban ee kululi waxay leedahay adayg liidata iyo simanaanta dusha sare, qiimihiisuna waa ka hooseeyaa, halka birta duuban ee qabow ay leedahay awood iyo adayg wanaagsan, laakiin qiimihiisu waa ka sarreeyaa.
3) Xariijimaha birta duuban waxay u qaybsantaa duubid qabow iyo duubid kulul, oo leh heerkulka recrystallization oo ah barta lagu garto.
4) Wareegid qabow: Wareegid qabow waxaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu soo saaro xariijin xawaare sare leh.Xarigga birta duuban ee kulul: heerkulka rogaal-celinta kulul iyo heerkulka been-abuurka
5) Dusha sare ee birta duuban ee kulul ee aan electroplating lahayn waa brown madow, halka kan qabow duuban birta ah oo aan electroplating waa cawl, taas oo lagu garto karaa siman ee dusha ka dib electroplating, jilicsanaanta birta duuban qabow ka badan tahay. taas oo ah xariijimo bir ah oo kulul.
Xarigga birta duuban ee kulul waxay ku habboon tahay qaybaha wax soo saarka ee lagu farsameeyo samaynta qabowga, Dhismaha guud ee dhismayaasha, buundooyinka, maraakiibta, baabuurta, iwm.